AIA က “UN” အမညျရ ထူးခွားဆနျးသဈစှာတငျဆကျထားသညျ့ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ရနျကုနျမွို့၌ ပွုလုပျကငျြးပ - MySport Myanmar
AIA က “UN” အမညျရ ထူးခွားဆနျးသဈစှာတငျဆကျထားသညျ့ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ရနျကုနျမွို့၌ ပွုလုပျကငျြးပ
ရာစုနှဈကွာ သမိုငျးကွောငျးတဈခုနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ မိုငျတိုငျတဈခု စိုကျထူနိုငျခဲ့ခွငျးအထိမျးအမှတျအဖွဈ နိုငျငံတကာ အသကျအာမခံကုမ်ပဏီ၏ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို အနုပညာနှငျ့ ယဉျကြေးမှုတို့ ပေါငျးစပျဖနျတီးပွီး ရနျကုနျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျခဲ့သညျ။
ကမ်ဘာ့ အကွီးဆုံးအသကျအာမခံ ကုမ်ပဏီမြားထဲမှ တဈခုဖွဈသော AIA သညျ “UN” အမညျရ အနုပညာနှငျ့ယဉျကြေးမှုတို့ ရောနှောပေါငျးစပျထားသညျ့ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ ဇနျနဝါရီလ ၁၈ ရကျနတှေ့ငျ Junction City ၌ ကငျြးပခဲ့သညျ။ အဆိုပါ အနုပညာပွခနျးစုံ ပွပှဲအသှငျပွုလုပျထားသညျ့ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားသညျ AIA ၏ အာရှပစိဖိတျဒသေအတှငျး နောကျဆုံးနှငျ့ ၁၈ နိုငျငံမွောကျဖွဈသော မွနျမာနိုငျငံအတှငျးတှငျ စိုကျထူခဲ့သော မိုငျတိုငျမြားအတှကျ ဂုဏျပွုကငျြးပခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ့အပွငျ ၎င်းငျး၏ ပိုမိုကနျြးမာအသကျရှညျပွီး ပိုမိုကောငျးမှနျသော ဘဝမြားကို ပိုငျဆိုငျနိုငျရနျဟူသညျ့ ကတိစကားကို တညျမွဲစမေညျ့ ခွလှေမျးတဈခုလညျး ဖွဈသညျ။
၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ ရာနှုနျးပွညျ့လုပျပိုငျခှငျ့ရသညျ့ အသကျအာမခံကုမ်ပဏီခှဲတဈခု အဖွဈ ပွညျထောငျစု သမ်မတ မွနျမာနိုငျငံတျော စီမံကိနျး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန မှ လုပျငနျးလုပျကိုငျခှငျ့လိုငျစငျ ကို လကျခံရရှိခဲ့ပွီးနောကျ လအနညျးငယျတှငျမှာပငျ ဖှငျ့ပှဲအခမျးအနားကို ကငျြးပခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ဖှငျ့ပှဲ အခမျးအနားသို့ AIA Group မှ AIA Group Chief Executive and President ဖွဈသူ Mr. Ng Keng Hooi ၊ AIA ၏ Asia-Pacific Regional CEO ဖွဈသူ Mr. Tan Hak Leh ၊ AIA Myanmar ၏ CEO ဖွဈသူ Mr. Nhon Ly (Luc) ၊ AIA ၏ မိတျဖကျမြား၊ မီဒီယာမြား နှငျ့ AIA Myanmar မှ ဝနျထမျးမြား တကျရောကျခဲ့ကွသညျ။
UN (အောနျ) သညျ ပွငျသဈဘာသာစကားတှငျ နံပါတျ (၁) ဟု အဓိပ်ပာယျရပွီး AIA အတှကျ နကျနဲသညျ့ အဓိပ်ပာယျကို ဆောငျသညျ။၎င်းငျးသညျ ကုမ်ပဏီ၏ “ပထမ” ပေါငျးမြားစှာကို ကိုယျစားပွုပွီး ဒီဂဈြတယျမီဒီယာကို အသုံးပွု၍ ဆနျးသဈသော အမှတျတံဆိပျတဈခု ဖွဈလာစရေနျအတှကျလညျး ရညျရှယျသညျ။ ‘UN’ သညျ စကားလုံးမြား၏ အရှတှေ့ငျ ရှိပါက ပွောငျးလဲပုဒျ တဈခု ဖွဈသှားပွီး မူလဦးတညျရာမှ ပွောငျးလဲကာ ‘Uncovered’, ‘Unleashed’ and ‘Undivided’ ဟူသော စှမျးအငျပွညျ့စကားလုံးမြားကဲ့သို့ ပွောငျးလဲသှားသညျ။ ၎င်းငျးစှမျးအငျသညျ AIA အတှကျ ယခငျက မမွငျဖူးသေးသညျ့ ဦးတညျခကျြမြားဖွငျ့ မွနျမာနိုငျငံတှငျ စှမျးဆောငျ သှားမညျဖွဈကွောငျး ရညျရှယျသညျ။ ဤအယူအဆကို အသကျသှငျးပုံပျေါလာစရေနျ အနုပညာ လကျရာမွောကျ အခနျး (၅)ခနျး စီစဉျထားရှိမညျဖွဈပွီး တဈခနျးခငျြးစီသညျ ၎င်းငျး၏ ကှဲပွားသော အခွခေံအကဆြုံး ကိုယျစားပွု ခကျြမြားနှငျ့ အနာဂတျအတှကျ ရညျမှနျးခကျြကွီးသညျ့ မြှျောလငျ့ခကျြမြားနှငျ့ ထပျတူကနြမေညျ ဖွဈသညျ။
“AIA မှာရှိတဲ့ ကြှနျတျောတို့ အားလုံးဟာ “UN” ကနတေဈဆငျ့ မွနျမာနိုငျငံမှာ ယခုခြိနျအထိရရှိခဲ့တဲ့ အောငျမွငျမှုတှကေို ထူးခွားသဈလှငျတဲ့ ပုံစံတဈမြိုးနဲ့ တငျဆကျပွသရငျး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ကွှယျဝတဲ့ ယဉျကြေးမှု တှကေို ဂုဏျပွုတာဖွဈတဲ့အတှကျ တကယျကို ဝမျးသာပါတယျ။ ပွညျသူတှအေားလုံးအတှကျ “ပိုမိုကနျြးမာ အသကျရှညျပွီး ပိုမိုကောငျးမှနျသော ဘဝတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျနိုငျစရေနျ” ဆိုတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ကတိစကားအတိုငျး စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ အသကျအာမခံလုပျငနျး နယျပယျတဈခုကို တညျဆောကျဖို့ ရညျရှယျပွီး တီထှငျဆနျးသဈတဲ့ ခဉျြးကပျမှုတှနေဲ့ ဒီအခမျးအနားကို အကောငျထညျဖျောထားတာဖွဈပါတယျ။ အစှမျးကုနျ တိုးတကျလာတော့မယျ့ တိုငျးပွညျရဲ့ အာမခံလုပျငနျးကို ကြှနျတျောတို့ရဲ့ မိတျဖကျတှနေဲ့ ပူးပေါငျးပွီး ဖှံ့ဖွိုး တိုးတကျအောငျဆောငျရှကျနိုငျမယျလို့ ယုံကွညျသလို ကြှနျတျောတို့ ကတိ‌အတိုငျး မွနျမာနိုငျငံက ပွညျသူတှကေို သူတို့အတှကျ အံ့သွဖှယျကောငျးတဲ့ အမှတျရစရာ ဘ၀လုံခွုံမှု‌၊ အောငျမွငျမှုတှနေဲ့အတူ ပိုမိုတောကျပတဲ့ အနာဂတျကို ရရှိအောငျဆောငျရှကျသှားဖို့ ရညျရှယျထားပါတယျ” ဟု AIA Myanmar ၏ အမှုဆောငျအရာရှိခြုပျ Mr. Nhon Ly (Luc) က ပွောကွားခဲ့သညျ။
“အာရှ ပစိဖိတျဒသေအတှငျး အသကျအာမခံလုပျငနျး ကှနျယကျထဲသို့ မွနျမာနိုငျငံ ဝငျရောကျလာတာကို အရမျးပဲ ဝမျးသာကွိုဆိုပါတယျ။ အရေးပါတဲ့ အခနျးကဏ်ဍ အသဈမြားစှာကိုလညျး စိုကျထူနိုငျခဲ့တဲ့အတှကျ AIA မွနျမာ အဖှဲ့သား တှအေားလုံးကိုလညျး ဂုဏျပွုပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ဟာ နိုငျငံ ၁၈ နိုငျငံမှာရှိတဲ့ အလြောကျ နှဈပေါငျး ၁၀၀ အတှငျးမှာ မတူကှဲပွားတဲ့ ယဉျကြေးမှုမြားနဲ့ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးက လူဦးရသေနျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ မိသားစုမြိုးဆကျပေါငျးမြားစှာကို ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့အပွငျ ရာစုနှဈတဈခုကွာ အတှအေ့ကွုံရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ပျေါလစီကိုငျဆောငျ သူတှလေိုအပျတဲ့ အရညျအသှေးမွငျ့ အသကျအာမခံ ကြှမျးကငျြမှုတှကေို ပေးအပျသှားဖို့ ကြှနျတျောတို့ ကတိပွုပါတယျ။” လို့ AIA Group ၏ Chief Executive and President Mr. Ng Keng Hoo က ပွောကွားခဲ့သညျ။
AIA Myanmar ၏ ကိုယျစားလှယျရုံးခှဲကို ၂၀၁၃ ခုနှဈတှငျ စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့သညျ့ ခွောကျနှဈ အတှငျးတှငျ အာမခံလုပျငနျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ customers မြား ၏ ဗဟုသုတ တိုးပှားစရေနျ အမြိုးမြိုးသော လှုပျရှားမှုမြားတှငျ တကျကွှစှာ ပါဝငျခဲ့သညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ နိုဝငျဘာလတှငျ မွနျမာနိုငျငံ၌ ရာနှုနျးပွညျ့ လုပျပိုငျခှငျ့ရသညျ့ ကုမ်ပဏီခှဲတဈခုအဖွဈ လုပျကိုငျနိုငျရနျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျော စီမံကိနျး၊ ဘဏ်ဍာရေးနှငျ့ စကျမှုဝနျကွီးဌာန မှ လုပျငနျးလုပျကိုငျခှငျ့လိုငျစငျကို လကျခံရရှိခဲ့ပွီး ရကျအနညျးငယျ အတှငျး တှငျပငျ ပထမဆုံးပျေါလစီကိုငျဆောငျသူမြားနှငျ့ လကျမှတျ ရေးထိုးနိုငျခဲ့သညျ။
ကုမ်ပဏီသညျ တိုငျးပွညျ၏ လူမှုအသိုငျးအဝိုငျးကို အကြိုးပွုသှားရနျ ရညျရှယျထားပွီး အနာဂတျတှငျ ပိုမို ထူးခွားသညျ့ လှုပျရှားမှုမြားလညျး ပါဝငျဆောငျရှကျသှားမညျ ဖွဈသညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ လမြားကလညျး ရပျရှာ အကြိုးပွု ဆောငျရှကျခကျြမြားကို လုပျဆောငျခဲ့ပွီး AIA သညျ English Premier League club ဖွဈသော Tottenham Hotspur မှ နညျးပွမြားကို ချေါယူ၍ ရနျကုနျမွို့ရှိ ကလေးမြားကို ဘောလုံးအားကစားလကေ့ငျြ့ ပေးသညျ့ လှုပျရှားမှု ဖွဈသညျ့ “AIA KICK!” ကိုလညျး စီစဉျ ဆောငျရှကျနိုငျခဲ့သညျ။ AIA သညျ နှဈတဈရာ ပွညျ့ အထိမျးအမှတျ ကို ကငျြးပသညျ့ အနဖွေငျ့ “AIA GO! FOR LIGHT” အမညျရ 5K အပွေးပွိုငျပှဲ ကို ကငျြးပခဲ့ ပွီး ပုဂံရှိ လြှပျစဈမီးမရရှိသေးသော အိမျခွေ ၁၀၀ ကို လညျး ဆိုလာပွားမြားလှူဒါနျးနိုငျခဲ့သညျ။
AIA Myanmar ၏ “UN” ပွခနျးကို ပွညျသူမြားအတှကျ ဖှငျ့လှဈခဲ့ပွီး ဇနျနဝါရီလ (၁၉) ရကျနတှေ့ငျ AIA ၏ ရာဇ၀ငျ လကျရှိလုပျ‌ဆောငျခကျြမြားနှငျ့ အနာဂါတျတို့ကို စိတျဝငျစားဖှယျပွခနျးမြားနှငျ့ တငျဆကျထားပွီး လလေ့ာကွညျ့ရှု ရနျအတှကျ online မှ စာရငျးပေးသှငျးသူအယောကျ ၂၀၀၀ ရှိခဲ့သညျ။ AIA Myanmar ၏ “UN” အခမျးအနား နှငျ့ အခွား စိတျလှုပျရှားဖှယျကောငျးသော အစီအစဉျမြား အကွောငျးပိုမို သိရှိလိုပါက AIA Myanmar ၏ တရားဝငျ Facebook စာမကျြနှာ ဖွဈသော https://www.facebook.com/AIA.Myanmar.MM/ တှငျ ဝငျရောကျ ကွညျ့ရှု လလေ့ာနိုငျပါသညျ။
AIA က “UN” အမည်ရ ထူးခြားဆန်းသစ်စွာတင်ဆက်ထားသည့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၌ ပြုလုပ်ကျင်းပ
ရာစုနှစ်ကြာ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုင်တိုင်တစ်ခု စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ခြင်းအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် နိုင်ငံတကာ အသက်အာမခံကုမ္ပဏီ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို အနုပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုတို့ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးပြီး ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးအသက်အာမခံ ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော AIA သည် “UN” အမည်ရ အနုပညာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတို့ ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် Junction City ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။ အဆိုပါ အနုပညာပြခန်းစုံ ပြပွဲအသွင်ပြုလုပ်ထားသည့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသည် AIA ၏ အာရှပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း နောက်ဆုံးနှင့် ၁၈ နိုင်ငံမြောက်ဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် စိုက်ထူခဲ့သော မိုင်တိုင်များအတွက် ဂုဏ်ပြုကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည့်အပြင် ၎င်း၏ ပိုမိုကျန်းမာအသက်ရှည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်ဟူသည့် ကတိစကားကို တည်မြဲစေမည့် ခြေလှမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရာနှုန်းပြည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသည့် အသက်အာမခံကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခု အဖြစ် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီးနောက် လအနည်းငယ်တွင်မှာပင် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ AIA Group မှ AIA Group Chief Executive and President ဖြစ်သူ Mr. Ng Keng Hooi ၊ AIA ၏ Asia-Pacific Regional CEO ဖြစ်သူ Mr. Tan Hak Leh ၊ AIA Myanmar ၏ CEO ဖြစ်သူ Mr. Nhon Ly (Luc) ၊ AIA ၏ မိတ်ဖက်များ၊ မီဒီယာများ နှင့် AIA Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
UN (အောန်) သည် ပြင်သစ်ဘာသာစကားတွင် နံပါတ် (၁) ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး AIA အတွက် နက်နဲသည့် အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်သည်။၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ “ပထမ” ပေါင်းများစွာကို ကိုယ်စားပြုပြီး ဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာကို အသုံးပြု၍ ဆန်းသစ်သော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်အတွက်လည်း ရည်ရွယ်သည်။ ‘UN’ သည် စကားလုံးများ၏ အရှေ့တွင် ရှိပါက ပြောင်းလဲပုဒ် တစ်ခု ဖြစ်သွားပြီး မူလဦးတည်ရာမှ ပြောင်းလဲကာ ‘Uncovered’, ‘Unleashed’ and ‘Undivided’ ဟူသော စွမ်းအင်ပြည့်စကားလုံးများကဲ့သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်။ ၎င်းစွမ်းအင်သည် AIA အတွက် ယခင်က မမြင်ဖူးသေးသည့် ဦးတည်ချက်များဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စွမ်းဆောင် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရည်ရွယ်သည်။ ဤအယူအဆကို အသက်သွင်းပုံပေါ်လာစေရန် အနုပညာ လက်ရာမြောက် အခန်း (၅)ခန်း စီစဉ်ထားရှိမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခန်းချင်းစီသည် ၎င်း၏ ကွဲပြားသော အခြေခံအကျဆုံး ကိုယ်စားပြု ချက်များနှင့် အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက်ကြီးသည့် မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ထပ်တူကျနေမည် ဖြစ်သည်။
“AIA မှာရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ “UN” ကနေတစ်ဆင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယခုချိန်အထိရရှိခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ထူးခြားသစ်လွင်တဲ့ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ တင်ဆက်ပြသရင်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ကြွယ်ဝတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု တွေကို ဂုဏ်ပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ်ကို ဝမ်းသာပါတယ်။ ပြည်သူတွေအားလုံးအတွက် “ပိုမိုကျန်းမာ အသက်ရှည်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေရန်” ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကတိစကားအတိုင်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အသက်အာမခံလုပ်ငန်း နယ်ပယ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုတွေနဲ့ ဒီအခမ်းအနားကို အကောင်ထည်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းကုန် တိုးတက်လာတော့မယ့် တိုင်းပြည်ရဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိတ်ဖက်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်သလို ကျွန်တော်တို့ ကတိ‌အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို သူတို့အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ အမှတ်ရစရာ ဘ၀လုံခြုံမှု‌၊ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပိုမိုတောက်ပတဲ့ အနာဂတ်ကို ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်” ဟု AIA Myanmar ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr. Nhon Ly (Luc) က ပြောကြားခဲ့သည်။
“အာရှ ပစိဖိတ်ဒေသအတွင်း အသက်အာမခံလုပ်ငန်း ကွန်ယက်ထဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ ဝင်ရောက်လာတာကို အရမ်းပဲ ဝမ်းသာကြိုဆိုပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အသစ်များစွာကိုလည်း စိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် AIA မြန်မာ အဖွဲ့သား တွေအားလုံးကိုလည်း ဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံ ၁၈ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အလျောက် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ အတွင်းမှာ မတူကွဲပြားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများနဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက လူဦးရေသန်းပေါင်းများစွာနဲ့ မိသားစုမျိုးဆက်ပေါင်းများစွာကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အပြင် ရာစုနှစ်တစ်ခုကြာ အတွေ့အကြုံရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပေါ်လစီကိုင်ဆောင် သူတွေလိုအပ်တဲ့ အရည်အသွေးမြင့် အသက်အာမခံ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပေးအပ်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကတိပြုပါတယ်။” လို့ AIA Group ၏ Chief Executive and President Mr. Ng Keng Hoo က ပြောကြားခဲ့သည်။
AIA Myanmar ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးခွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ခြောက်နှစ် အတွင်းတွင် အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ customers များ ၏ ဗဟုသုတ တိုးပွားစေရန် အမျိုးမျိုးသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရာနှုန်းပြည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသည့် ကုမ္ပဏီခွဲတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မှ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ပြီး ရက်အနည်းငယ် အတွင်း တွင်ပင် ပထမဆုံးပေါ်လစီကိုင်ဆောင်သူများနှင့် လက်မှတ် ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီသည် တိုင်းပြည်၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကို အကျိုးပြုသွားရန် ရည်ရွယ်ထားပြီး အနာဂတ်တွင် ပိုမို ထူးခြားသည့် လှုပ်ရှားမှုများလည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် လများကလည်း ရပ်ရွာ အကျိုးပြု ဆောင်ရွက်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး AIA သည် English Premier League club ဖြစ်သော Tottenham Hotspur မှ နည်းပြများကို ခေါ်ယူ၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကလေးများကို ဘောလုံးအားကစားလေ့ကျင့် ပေးသည့် လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်သည့် “AIA KICK!” ကိုလည်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ AIA သည် နှစ်တစ်ရာ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကို ကျင်းပသည့် အနေဖြင့် “AIA GO! FOR LIGHT” အမည်ရ 5K အပြေးပြိုင်ပွဲ ကို ကျင်းပခဲ့ ပြီး ပုဂံရှိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသော အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကို လည်း ဆိုလာပြားများလှူဒါန်းနိုင်ခဲ့သည်။
AIA Myanmar ၏ “UN” ပြခန်းကို ပြည်သူများအတွက် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီလ (၁၉) ရက်နေ့တွင် AIA ၏ ရာဇ၀င် လက်ရှိလုပ်‌ဆောင်ချက်များနှင့် အနာဂါတ်တို့ကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြခန်းများနှင့် တင်ဆက်ထားပြီး လေ့လာကြည့်ရှု ရန်အတွက် online မှ စာရင်းပေးသွင်းသူအယောက် ၂၀၀၀ ရှိခဲ့သည်။ AIA Myanmar ၏ “UN” အခမ်းအနား နှင့် အခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အစီအစဉ်များ အကြောင်းပိုမို သိရှိလိုပါက AIA Myanmar ၏ တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ ဖြစ်သော https://www.facebook.com/AIA.Myanmar.MM/ တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု လေ့လာနိုင်ပါသည်။
MySport Myanmar2020-01-22T10:09:48+06:30January 22nd, 2020|Football, News|